Fetin’ny krismasy:ANKIZY 13 000 NOZARAIN’NY VADIN’NY FILOHAMPIRENENA KILALAO -
AccueilRaharaham-pirenenaFetin’ny krismasy:ANKIZY 13 000 NOZARAIN’NY VADIN’NY FILOHAMPIRENENA KILALAO
Tsy nanadino ireo ankizy ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina ao anatin’izao andro fety izao. Amin’ny maha renim-pianakaviana azy dia tao am-pony ny famalifaliana an’ireo ankizy marobe amin’ny maha fetin’ny ankizy ny fetin’ny noely. Nahitana hetsika an-dampihazo, sono mobile nanaovana fanentanana. Fampifaliana ny ankizy zanaky ny sahirana ara-pivelomana no nataony ary nanome kilalao azy ireo. Miisa 13 000 ireo zaza ireo. Saika nahitana an’ity « sono mobile » ity ny tany Dorodosy Atsimondrano, Ambohimangakely Avaradrano, Akamasoa Andralanitra, Analamahitsy, Ankorondrano, Andohatapenaka, ary mifanindran-dalana amin’izany ny fizarana kilalao. Ny nanentana ny ankizy tamin’izany dia Okalou. Nahafaly ankizy tokoa ny niaraka tamin’ireto mpanentana ireto satria dia hain’ireo ankizy tsianjery ny fomba fanaon’izy ireo. Misy ny tantara an-tsehatra izay nentin’ireto mpanakanto ireto nampita ny hafatra ho an’ny ankizy. Hafaliana ho an’ny vadin’ny Filoham-pirenena araka izany ny mahita ny endrik’izy ireo feno hafaliana. Mba tsy hipitrapitra mampalahelo ireo zaza ireo manoloana an’ireo namany izay manan-katao ny Ray aman-dreniny eny anivon’ny fiarahamonina.
Tsy vao izao moa no nanao asa fampifalifaliana ny ankizy tahaka izao ny vadin’ny Filoham-pirenena fa efa nisy ihany koa tamin’ny fiandohan’ity volana Desambra ity teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ary ankizy avy amin’ny boriborintany enina teto Antananarivo no nomeny anjara tamin’izay. Efa nahatratra 2 000 tany ho any izy ireo. Raha atambatra araka izany ny zaza efa nahazo ny anjarany teto Antananarivo sy ny manodidina dia efa mahatratra 15 000. Manginy fotsiny ny asa efa nataony tany aloha, ny fanampiana ireo nila vonjy na ara-pahasalamana na fikambanana na olon-tsotra. Tsy nanavaka mihitsy izy fa araka ny efa nambarany foana dia iray ny Malagasy ka mahatohina ny fony ny fahoriana izay mahazo ny mpiray tanindrazana aminy ka mahatonga azy manao asa sosialy tahaka izao. « Raha mbola misy koa ny azo atao dia mbola hanohy izany hatrany izy », araka ny nambarany.